Apple wuxuu bilaabay Podcasts cusub oo loogu talagalay carruurta iyo qoyska | Waxaan ka socdaa mac
Apple wuxuu bilaabayaa Podcasts cusub oo loogu talagalay carruurta iyo qoyska
Apple Podcasts ma noqon karto midka ugu adag suuqa. Laakiin halkaas waa joogaan oo ma quustaan. Waxay rabaan inay gaaraan dhammaan isticmaaleyaasha waxayna rabaan inay abuuraan waxyaabo ku lug leh dhammaan da'da. Waxa kaliya ee ka maqnaa waxay ahayd waax aan si weyn loo isticmaalin taasina waxay noqon kartaa sababta Apple ugu guuleysan doonto safarkan cusub barnaamijyadeeda carruurta iyo qoysaska.
Apple waxay ku dhawaaqday inay soo bandhigayso khibrad cusub oo loogu talagalay ugu horreyn carruurta iyo qoysaska gudaha barnaamijkaaga Podcasts. Shirkadda Californian waxay iskaashi la yeelatay hay'adda aan macaash doonka ahayn «Warbaahinta Dareenka Wadaagga », kaas oo diiradda saaraya talooyinka nuxurka ku habboon da'da ee xubin kasta oo qoys ah.
Khibraddan cusub ee loogu talagalay carruurta iyo qoyska, waxay waalidiinta ugu sahlanaan doontaa inay helaan podcasts habboon Loogu talagalay carruurta da 'kasta leh, oo ay ku taliyeen koox koox. Uruurinta Podcast-ka waxaa laga heli doonaa abuurayaasha sida Tinkercast, American Public Media, Gen-Z Media, Pinna, Tumble, Highlights, WNYC Studios, Rebel Girls, iyo Nickelodeon. Bandhig kasta waxaa soo xushay Warbaahinta 'Common Sense Media', iyadoo lala kaashanayo Apple Podcasts.
Marka la bilaabayo, waayo-aragnimada waxaa ka mid ah afar ururinta:
Xulashada Warbaahinta ee Dareenka Badan: Waqtiyada oo dhan ayaa jecel in qoysasku hubaal ka helaan madadaalo iyo macluumaad.
Mid kale! Qisooyin qarsoodi ah iyo riwaayado ficil ku dheehan tahay oo carruurta da 'walba leh aysan rabin inay joojiyaan maqalka.
Carruurtu waxay yaqaanaan sida ugufiican: Bandhigyo caan ah loogu talagalay carruurta, oo ay doorteen carruurtu naftooda.
Waqtiga Sheekada: Bandhigyo ku saleysan taariikhda ee carruurta u rarta adduunyo male ah.
Khibrada cusub ayaa laga heli karaa arjiga Podcasts iyo bogga Apple (Weli ma shaqeynin) Mareykanka. Waxaa la cusbooneysiin doonaa bil kasta oo leh podcasts cusub oo caan ah, iyo sidoo kale uruurin dheeri ah oo kuxiran daqiiqado taariikhi iyo dhaqan muhiim ah. Waxay ku biiraysaa Bogga Websaydhka ee Apple u sameysay si gaar ah carruurta yaryar.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple wuxuu bilaabayaa Podcasts cusub oo loogu talagalay carruurta iyo qoyska
Abaalmarinta Nobel ee Malala Yousafzai si loo abuuro waxyaabo gaar ah oo loogu talagalay Apple TV +
Ku qor taariikhdan kalandarkaaga: Maarso 23-keeda. Dhacdooyinka Apple (ama maahan)